"Soomaali" national army in Tigreyland? - Politics - Somali Forum - Somalia Online
Been iyo fowdo ayee baraha bulshada ku wadaan Mahad Salaad and et al, using bogus photos while claiming members of Soomaali army are fighting in Tigreyland. Well, dowladda dhexe ayaa jawaab ka soo saartay warkaan beenaadka ah.
DF oo war rasmi ah kasoo saartay askarta la sheegay in lagu laayey Tigray
Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay wararka sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa Soomaaliya oo tababar loo geeyey dalka Eritrea, lagu dilal dagaalka gobolka Tigray.
Cabdisalaan Guuleed oo wareysi siiyey Idaacadda Kulmiye ayaa sheegay in loo xaqiijiyey geerida 370 askari oo ah dhalinyaradii Soomaaliyeed ee tababarka loo geeyey dalka
Almost everyone is wondering why the mucaarad haven't brought this question of Tigrey-SNA story to ex-pm Hasan Ali kheir who is one of the mucaarad council.
If this was true they mucaarad should have brought forward their quiete man Hasan Ali kheire, his silence here tells a story.
21 hours ago, Dalmar1 said:
Hooyooyinka ka qeylinaayo Gaalkacyo dadka kicinaayo waala ogyahay as well.
This shameless gudhuu boy can lap dance for Failmaajo as much as he desires but not at the expense of our grieving families.
Qiimaha dadku, waa qaali markay xukuumad fiican haystaan.
Wax qiimaha nolosha dadkeena ka hadlaya dawladaan ka hor miyaad aragteen?
Mayd gaari gacan saaran oo lagu ag ganacsanayo waan soo aragnay,ciddii dishayna ay ag taaganyihiin saxaafad iyo mucaaradba.
Kuwaan Mucaaradka sheeganaya oo qabiilka isku bahaystay, markay aduunka ka hor qayliyaan oo ay tusaan inay ka walaacsanyihiin nolosha wiilashoodii waa wanaag ay farmaajo usoo jiideen.
(Somalia is back again)
Siyaasadda dhinaca duminta iyo kala fogaynta bay ka barteen.
faaska aad wax ku goynayso marbaa laga yaabaa inuu afkiisu doolshe noqdo.
Waa markii ugu horaysay oo soomaaliya lagu arko 30 sano ka dib, dad ka damqanaya nolosha wiilashooda.
Habrihii ay waaleen way la hadleen caruurtoodii wayna u sheegeen inay banooni ku ciyaarayaan guriga ay seexdaan gadaashiisa.
Mooryään isbaaro ku nool ahaa 30 sano maxaa ka sugee, sida dhooraha qoraalkiisa qaabka daran kaa horeeyo. Hooyooyinka kistoo la soo laaluushay ku marmarsiyo ka dhiganaayaan.
Personally, waaba jeclaan lahaa ciidamo qaran Soomaaliyeed Tigreyga dhulkooda ku soo karbaasho, aargudasho ayee Soomaalideena noo ahaan lahayd xasuuqee ka geysan jireen Soomaaliya oo Soomaali Galbeed ku jirto tan iyo bartamihii sagaashameyadii.
Ethiopia’s government denies that Somali soldiers fought alongside federal troops in the ongoing conflict in its Tigray region
Laakiin dowladda Federaalka arintan waa ay beenisay iyada oo ku tilmaamtay warar la siyaasadeynayo oo ay ka faa'ideysanayaan dadka dowladda ka soo horjeeda.